Ciyaaryahan muhiim u kooxda Blaugrana oo dib ugu soo laaban doono, kasoo ciyaari doono kulanka soo aadan. | Entertainment and News Site
Home » News » Ciyaaryahan muhiim u kooxda Blaugrana oo dib ugu soo laaban doono, kasoo ciyaari doono kulanka soo aadan.
Ciyaaryahan muhiim u kooxda Blaugrana oo dib ugu soo laaban doono, kasoo ciyaari doono kulanka soo aadan.
daajis.com:- Daqiiqado kulul kadib, Neymar ayaa loo taagay kaar casaan ah ciyaar ay kooxdiisu la ciyaareysay kooxda Malaga, waxaana laga ganaaxay labo kulan oo dheeraad ah, maadaama uu sameeyay sacabatumid kajan ah, hada wuu u soo laabtay kooxdiisa.
Blaugrana waxay kusoo laabatay hogaanka horyaalka waxayna u baahan tahay xidigeeda reer Brazil inuu kusoo laabto qaab ciyaareedkiisa wanaagsanaa.
Espanyol waa koox leh hamiga inay ka qeybgasho European cup, dhanka kale waa koox aad u la xifaaltanto dariskeeda, Neymar na wuxuu ku soo aaday garoonka kooxdan ee lagu magacaabo Estadio Cornella El-Prat waxaana hubanti ah in cadaawad lagu soo dhaweyn doono.
“Ciyaaryahano dhowr ah ayaa ku galaayo qalaad Neymar,” waxaa sidaa yiri Luis Enrique. “Inagu muhiim ayuu nooyahay.”
Dhanka kale Lionel Messi wuxuu ku jiraa qaab ciyaareed fiican sidaa si lamid ah Luis Suarez waa diyaar, Neymar na dib ayuu ula hawlgalayaasha MSN.